निर्वाचन स्थगित नगरे मुलुक मुठभेडमा जान्छः महतो
प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०९:१३
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले असार १४ गतेको निर्वाचन स्थगित नगरिए त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन। ‘मुलुकलाई कुन बाटोमा लैजाने त्यो सरकारको हातमा छ। २ गते ‘नोमिनेशन’को कुरा गर्यो भने लड्न तयार हुनुपर्छ। समाधान गर्छु भन्ने हो भने हामी निर्वाचनमा जान पनि तयार छौं। सरकारले यही बेलामा बुद्धि पुर्याउन पर्छ’, बुधबार बिहान सेतोपाटीसँग महतोले भने, ‘मधेसले अहिले निर्वाचनभन्दा पनि अधिकार खोजेको छ। त्यसको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ।’
उनले निर्वाचनको मिति नसारी गरिने वार्ताको औचित्य नहुने समेत बताए। प्रस्तुत छ, महतोसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले तपाईँहरुलाई आज वार्तामा बोलाएको छ नि?
केका लागि वार्ता गर्ने? अहिले वार्ताको आवश्यकता छ र? पर्सि ‘नोमिनेशन’ हो अब किन वार्ता गर्ने? मुठभेडमा जाने हो भने पर्सि ‘नोमिनेशन’ गरे भइहाल्यो। होइन भने समाधान गरेर निर्वाचन गराउन पर्यो। वार्ताको लागि एजेण्डा हुनपर्यो। सरकारसँग के छ एजेण्डा? त्यसैले पर्सि सरकारले कि ‘नोमिनशन’ गराएर मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान प¥यो कि द्वन्द्व टार्न आन्दोलनका एजेण्डालाई सम्बोधन गरेर चुनावमा जानुपर्यो। दुईटा उपाय छन्, कुन रोज्ने सरकारको कुरा हो।
त्यसो भए सरकासँग वार्ताको औचित्य छैन?
हामी यो निर्वाचनमा भाग लिन सक्दैनौं। हाम्रा एजेण्डाको सम्बोधन भएको छैन। समस्याको समाधान भएको छैन। दुई गते निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर भनेर मात्रै हुँदैन। हाम्रा मागको सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने भनेर निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रम लिएर हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौं। हाम्रो समस्या समाधान नभएसम्म विरोध हुन्छ। सरकारले एकतर्फी रूपमा हाम्रा माग सम्बोधन गर्न पर्ने होइन? द्वन्द्वमा जाने हो भने २ गते मनोनयन गर भन्ने होइन भने समाधान गरेर मात्रै निर्वाचन गर भन्ने हो। हामी काठमाडौंमा छैनौं अब वार्ताको कुरा गरेर हुन्छ? वार्ताबाट भागेको होइन तर केको लागि वार्ता गर्ने?
तपाईँहरू वार्तामा आउन सरकारले के गरिदिनु पर्यो?
समस्याको समाधान गर्नुपर्यो।
दुई दिनमा समस्याको समाधान सम्भव छ त?
हिजो अदालतले रोक्का गरिसक्यो दुई दिनमा कसरी सम्भव छ भन्नुस् त? यो त असम्भव कुरा हो। अदालतले सरकारको निवेदन नै खारेज गरिसक्यो। अनि स्थानीय तहको संख्या कसरी बढ्छ? संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुगेको छैन। सरकारले गर्न पर्ने काम पनि गरेको छैन। मुद्दा फिर्ता भएको छैन। त्यसैले दुई दिनमा त समस्याको समाधान हुँदैन। यदि सरकारले सक्छ भने राम्रो भइहाल्यो तर यो सम्भव छैन।
सरकारसँग सहमतिको सम्भावना सकिएको हो?
राजनीतिमा सम्भावना सधैँ रहन्छ। कहिले पनि सकिदैन। समाधानको बाटो खोज्यो भने बाटो भेटिन्छ। बाटो भेटिएन भने द्वन्द्व बढ्छ। द्वन्द्व बढाउने/नबढाउने सरकारको हातमा छ। आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाऊ, निर्वाचनमा आउन देऊ भनेर हामीले त सधैँ भनिरहेका छौं। हामीले त निर्वाचनको बाटो बन्द नगर बाटो नछेक भनेर भनेका हौं। सरकारले वातावरण बनाएर निर्वाचनको बाटो खोल्नुपर्छ। त्यो नगरेर हठात् ‘नोमिनेशन’ गराउँछु मात्रै भनिरहे द्वन्द्व हुन्छ।
त्यसो भने अबको बाटो के त?
अघि नै भनें अब दुई वटा बाटा छन्। योमध्ये सरकारले जुनसुकै बाटो रोजोस् हामीलाई मतलब छैन। हामी लड्न तयार नै छौं। हामी निर्वाचनमा भाग लिन पनि तयार छौं। कुन बाटोमा लैजाने त्यो सरकारको हातमा छ। २ गते मनोनयनको कुरा गर्यो भने लड्न तयार हुनुपर्छ। समाधान गर्छु भन्ने हो भने हामी निर्वाचनमा जान पनि तयार छौं। सरकारले यही बेलामा वुद्धि पुर्याउन पर्छ। द्वन्द्वमा लगेर कसैलाई फाइदा छैन। चुनावका नाममा कतिले बलिदानी दिनुपर्ने हो? निर्वाचन भयो भने मुलुक मठभेडमा जान्छ। निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रम पार्टीले लिएको छ। हाम्रा कार्यकर्ता जनता चुनाव बिथोल्न जान्छन्।
सरकारको हातमा बन्दुक छ। केही नगरेको बेलामा त सरकारले गोली चलाउँछ भने अवरोध गर्न गएको मान्छेलाई त सरकारले जसरी पनि गोली चलाउँछ। कति हताहात हुने त्यो थाहा छैन। मुलुक नराम्रो द्वन्द्वमा फस्छ। समाधानको बाटो एउटा मात्रै छ। समस्या समाधान गरेर चुनाव गराउन पर्छ। समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। यसको लागि के गर्ने सरकारले सोच्न पर्छ। उम्मेदवारी दर्ता मिति सार्न पर्यो या निर्वाचन सार्नु पर्यो? चुनावको मिति सार्ने हाम्रो माग होइन। हाम्रो माग त समस्याको समाधान गर भन्ने हो। समास्या समाधान गर्न सरकारले भ्याउँदैन भने त्यो सरकारको कुरा हो।
तपाईँहरूका माग सम्बोधन गरेर असार १४ मा त निर्वाचन सम्भव छैन त?
त्यो त कसैगरी पनि सम्भव छैन। मनोनयन नै गर्न सम्भव छैन। त्यसैले या त मुठभेडमा जानुपर्यो या त मिति सारेर समस्याको समाधान गरेर निर्वाचन गराउन पर्यो।
सरकारले निर्वाचन गराउने अनि राजपा बाहेकका सबै दल निर्वाचनमा गए भने के हुन्छ?
मधेसको जनताले अधिकार खोजेको हो। चुनाव खोजेको होइन। यो हामीलाई पनि थाहा छ। मधेसी जनतालाई पनि थाहा छ। चुनाव आएपछि मधेसी जनताले बताउँछ। यो कुरा हामीले निर्वाचनको घोषणा भएपछि उठाएको होइन। पहिलादेखि नै हामी यसैको लागि लडिरहेका छौं। हामी यो संविधानका विरुद्ध लडेका छौं तर निर्वाचन त यही संविधानको कार्यान्वयनका लागि भएको हो। जुन संविधानको विरोध गर्दा जनताले साहदत दिए त्यही संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। त्यसैले जनता निर्वाचनको विरुद्धमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनमा लागेका केहीले जनतालाई धोका दिएर गएका छन् तर जनता थाकेका छैनन् र हारेको पनि छैनन्। जनता त आफ्नो अधिकारको लागि हिजो पनि लड्यो, आज पनि लड्छ र भोलि लागि पनि लड्न तयार छ।
व्यक्तिले धोका दिन सक्छ पार्टी गद्दार हुन सक्छ। जनता आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि लडिरहन्छ। मधेसको जनता त्यही पक्षमा छ। केही पार्टी निर्वाचनमा जाँदैमा जनता निर्वाचनमा जाँदैन। हिजो लड्ने जनता अहिले पनि लडिरहेको छ।
सरकारसँग वार्ताका लागि पनि निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने तपाईँहरूको सर्त हो?
२ गते उम्मेदवारी दर्ता छ। अब हामी केको लागि वार्तामा जाने। सरकारले माग पुरा गर्ने अवस्था छैन। भोलिसम्म माग पूरा हुने सम्भावना छैन अनि केको लागि वार्ता गर्ने? आन्दोलनको लागि वार्ता गर्ने कुरो भएन। कुनै पनि हालतमा १४ गतेको निर्वाचनमा जानको लागि सरकारले वातावरण बनाएन। त्यसैले वार्ता भनेको जालझेल मात्रै हो। औचित्यहीन वार्ता किन गर्ने? आन्दोलनमा गइरहेको बेलामा वार्तामा आइज भनेर कसरी आउने?